The Irrawaddy's Blog: မေမြတ်နိုးရဲ့ နိုင်ငံတကာမီဒီယာသို့ ထုတ်ပြန်ချက် အပြည့်အစုံ မြန်မာပြန်
မေမြတ်နိုးရဲ့ နိုင်ငံတကာမီဒီယာသို့ ထုတ်ပြန်ချက် အပြည့်အစုံ မြန်မာပြန်
စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ဦးဝိစာရလမ်းပေါ်က House of Memory စားသောက်ဆိုင်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကတဆင့် နိုင်ငံတကာ မီဒီယာတွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Miss Asia Pacific World 2014 သရဖူ ပြန်သိမ်းခံခဲ့ရသူ အလှမယ် မေမြတ်နိုးရဲ့ ကြေညာချက်အပြည့်အစုံဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ တွေ့ရတဲ့ မေမြတ်နိုး (ဓာတ်ပုံ - ဂျေပုိုင် / ဧရာဝတီ)
မေမြတ်နိုးရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ နိုင်ငံတကာမီဒီယာများအတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ
ကြေညာချက်မှ မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုချက်ကို ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ယနေ့နံနက်ပိုင်းက House of Memories တွင် ကျင်းပခဲ့သော အလှမယ် မေမြတ်နိုး၏ စာနယ်ဇင်း ရှင်းလင်းပွဲ၌ ကမ္ဘာ့မီဒီယာများသို့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ပြန်လည်တင်ပြအပ် ပါသည်။
ကိုးရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှ သတ်မှတ်လျာထားချိန်ထက် စောစီးစွာပြန်လာခဲ့သည့်အပေါ် လွန်ခဲ့သော ရက်ပိုင်း အတွင်းက ကျွန်မကိုရည်ရွယ်ပစ်မှတ်ထားလျက် မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲချက်များဖြင့် အုံလိုက်ကျင်းလိုက် တိုက်ခိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သော အခြေနေတွင် ကျွန်မ၏ ပထမဆုံးတုံ့ပြန်ချက်အနေဖြင့် မြန်မာနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှ အားပေးနှစ်သိမ့်ကြသူများ၏ တစ်ခဲနက်သော စေတနာမေတ္တာများအတွက် ကျွန်မ၏ရင်တွင်းမှ ကျေးဇူး တင်ပါကြောင်းနှင့် လှိုက်လှဲစွာ အသိအမှတ်ပြု တန်ဖိုးထားပါကြောင်း တင်ပြလိုပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ တင်ကူးကြံစည်မှုများဖြင့် အကွက်ကျကျ စီစဉ်ကာ ကျွန်မ၏ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိပါးရန် ကြိုးစား အားထုတ်နေချိန်တွင် ကိုယ့်အပေါ် ယုံကြည်ခြင်း၊ စာနာသနားခြင်းတို့ဖြင့် ရပ်တည်ပေးနေသော ပရိတ်သတ်ကြီး၏ အားပေးသံများကြောင့်သာ ကျွန်မအနေဖြင့် ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်စွမ်းရှိနေသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ထိုကာလများအတွင်း ကျွန်မအနေဖြင့် ပြန်လှန်ချေပခြင်းမပြုတော့ဘဲ ခပ်မဆိပ်သာနေရန်ရည်ရွယ်ထား
သော် လည်း ယခုလို တစ်ဖက်၏ ထိုးနှက်ချက်တို့မှာ ကျွန်မတို့ချစ်သော ပြည်ထောင်စုကြီး ကိုပါ စော်ကား
မော်ကားပြုသည့် အနေအထားသို့ရောက်လာချိန်တွင်မူ ကျွန်မအနေဖြင့် ဆက်လက်၍ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေ မည်ဆိုပါက ခွင့်လွှတ်ရခက်လောက်အောင်ကို တာဝန်ကင်းမဲ့စွာဖြင့် အပြင်းအထန် မျိုးချစ်စိတ်ကင်းမဲ့ ရာရောက်ပါချေတော့မည်။
ဤတွင် မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦးအနေဖြင့် စိတ်ပျက်တုန်လှုပ်မှုအဖြစ်ရဆုံး အချက်မှာ ကျွန်မတို့
မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ဒါရိုက်တာဇနီးမောက်နှံနှစ်ဦးတို့၏ လေသံများတွင် ကိုယ့်မွေးရပ်မြေအပေါ် သိက္ခာကျဆင်းအောင် တစ်ဖက်က ပြောဆိုနေသော ထိုးနှက်ချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး သူတို့ကပါ အားပေးထောက်ခံနေသည့် သဘောသဘာများကို မဖုံးနိုင်မဖိနိုင် တွေ့နေရခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်မအပေါ် သူတို့ဖက်မှ စွဲချက်တင်ထားသည့် အချက်ပေါင်းများစွာတို့အနက် တစ်ချက်မှာ ကျွန်မသည် မိမိကို ယခုလို သရဖူအနိုင်ရှိအောင် အားပေးမြှောက်စားခဲ့သည့် စာနယ်ဇင်းဆရာများနှင့် ပရိသတ်အပေါ် လိမ်လည်လှည့်ဖျားသည်သာမက မလေးမစား ရိုင်းစိုင်းခဲ့သည်ဟုဖြစ်ပါသည်။
ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်မတုံ့ပြန်လိုသည်မှာ ယခုလို ကျွန်မက လိမ်ညာတတ်ကြောင်း မောက် မာကြောင်း သူတို့စွပ်စွဲချက်အတိုင်း ပြုကျင့်ခဲ့ပါသည်ဟု မည်သည့်အခါကမျှ မည်သည့် မီဒီယာအဖွဲ့အစည်း ကရော လူထုပရိသတ်ကြီးကပါ ကျွန်မအပေါ် မကျေမနပ် ဝေဖန်အပြစ်တင်တာမျိုးခံခဲ့ရသည်ဟူ၍ လုံးဝမရှိခဲ့ပါ။
တကယ်တော့ လိမ်တတ် ညာတတ်သည့်အကြောင်း ပြောကြကြေးဆိုပါက ကျွန်မကို အဆိုတော်လုပ်ရန် ကိုးရီးယားသို့ ခေါ်ရန် ချုပ်ဆိုခဲ့သော စာချုပ်တွင် သုံးလနေထိုင်ရမည်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကျွန်မတို့ သား အမိနှစ်ယောက်နေထိုင်ရန် တိုက်ခန်းတစ်ခု ငှားရမ်းပေးမည်ဟု ဆိုခဲ့သော်လည်း အမှန်တကယ်ရောက် သွားချိန်တွင် ဆိုခဲ့သော နေရာထိုင်ခင်းမျိုး စီစဉ်ထားပေးခဲ့ခြင်း လုံးဝမရှိသည်ကို အံ့အားသင့်ဖွယ် ကြုံတွေ့ လိုက်ရပါသည်။
ထို့အပြင် ကိုရီးယားအဖွဲ့အစည်းဖက်မှ ကျွန်မအပေါ်စွပ်စွဲသည့်နောက်တစ်ချက်မှာ ကျွန်မိခင်သည် တရား မ၀င်သော နည်းဖြင့် (၃) လဗီဇာကို ထုတ်ယူခဲ့သည်ဟုဖြစ်ပါသည်။
သူတို့ဖက်မှ ခေါ်စာပို့ရာတွင် သြဂုတ်လ (၂၉) ရက်နေ့အထိလာရောက်နေထိုင်ရန် ရေးသားပေးခဲ့ သည် ကားမှန်ပါသည်။ ထိုစာကိုလည်း ကျွန်မတို့က ပြင်ပြီး တင်တာမဟုတ်ခဲ့ပါလျက် သံရုံးက (၃)လတိုင်အောင် ဗီဇာထုတ်ပေးလိုက်တာသာ ဖြစ်ပါသည်။
ဗီဇာလျှောက်ထားသူတစ်ဦးကို မည်သည့်ကာလတိုင်အောင် ဗီဇာပေးအပ်မည်ဆိုသည်မှာ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကိုရီးယားသံရုံးဖက်မှ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာသာဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် ကျွန်မကို မယ်အဖြစ်မှ ဖယ်ရှားပြီးချိန်တွင် ဆုသရဖူကို ကျွန်မကပြန်မပေးဘဲ ခိုးယူထွက်ပြေး လာသည်ဟုပင် စွပ်စွဲချက်မျိုးကိုလည်း သူတို့ဖက်က ရေးသားခဲ့ပါသေးသည်။
အမှန်တကယ် သူတို့က ကျွန်မကို မယ်အဖြစ်မှ ရပ်စဲသော ကြေငြာချက်ကို ထုတ်ပြန်ချိန်တွင် ကျွန်မသည် ရန်ကုန်သို့ပြန်ရန် လေယဉ်ပေါ်သို့ လမ်းခုလပ်မှာ ရောက်နေပြီဖြစ်ပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ကိုးရီးယားနိုင်ငံမှ ကျွန်မပြန်လာသည့်အချိန်အထိ ကျွန်မသည် အလှမယ်တစ်ဦးအဖြစ် သူတို့ကိုယ်တိုင်က အသိအမှတ်ပြုလျက်ပင် ရှိသေးသည့်အလျောက် ကိုယ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းကို တစ်ပါထည်းပြန်ယူလာသည်မှာ ခိုးသည်ဟုမဆိုနိုင်ကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။
ယင်းတို့ဖက်မှ ထုတ်ပြန်သော စာရွက်စာတမ်းများတွင် ကျွန်မဘာကြောင့် ပြန်ခဲ့ရသည်ဆိုသည့် အကြောင်း
နှင့် ပတ်သက်၍ အမှန်တရားကို ဖုန်းကွယ်ရန် ကြိုးစားထားသည်ကို ကျွန်မ မအံ့သြမိသော်လည်း သူတို့ အပြစ်ကို ကိုယ့်အပြစ်ဖြစ်အောင် ကျွန်မကပဲ မှားနေသည့်အလား ပြောဆိုရေးသားကာ မျက်နှာပြောင် ၀ံ့ကြသည်ကတော့ ထူးဆန်းနေပါသည်။
သူတို့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံခဲ့သည့်ကာလတစ်လျောက် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အပါအ၀င် မလျော် ကန်သော အနေအထားများကို တွေ့နေခဲ့သည်မှာ ကြာပါပြီ။
သို့ရာတွင် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော မျက်လုံးပြူးစရာအချက်များမှာ ကျွန်မကိုးရီးယားမှ အမြန်ပြန်ပြေး ချင်လာအောင်တွန်းပို့ခဲ့သည့် အချက်များဖြစ်နေသည့်အတွက် ပရိသတ်ကြီး အမှန်အတိုင်းသိရှိနိုင်ပါစေ ရန် လေးစားစွာတင်ပြလိုက်ရပါသည်။
ကျွန်မကိုးရီးယားက ပြန်လာခဲ့ရသည့် အဓိကအကြောင်းအရင်းများမှာ -
ဦးခေါင်းမှ ခြေဖျားအထိ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ရန် အတင်းအကျပ် ဖိအားပေးတာ ခံခဲ့ရခြင်း -
တရားဝင်ဗီဇာ (၃) လနှင့် လိုက်ပါလာသောမိခင်အား အတင်းအကျပ်ပြန်လွှတ်မည်ဟုဆိုသည်သာမက သူတို့နှင်ထုတ်တိုင်းမပြန်ပါက ကျွန်မနှင့် ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းပစ်မည်ဟုခြိမ်းခြောက် ခဲ့ခြင်း၊ အမှန်တော့ အဆိုပါစာချုပ်တွင်ပင် မိသားစုအဖော်အဖြစ် လိုက်ပါနေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည်ဟု ပါသည် ကို မသိကျိုးကျွံပြုခြင်း -
ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ ဗီဇာသက်တမ်းတိုးရန်ဟုဆိုကာ သူတို့ခေါ်ရာ ဂျပန်သို့ အမေကိုထားခဲ့ပြီး ကျွန်မတစ်ယောက်ထဲ လိုက်ရမည်ဟု ပြောလာခြင်း -
အရင်က ထုတ်လုပ်သူတာဝန်ကို သူတို့ကယူပါမည်ဆိုခဲ့သော်လည်း ကျွန်မထုတ်မည့် တေးစီးရီး အတွက်
ငွေအရင်းအနှီးကို ကျွန်မကပဲ ရှာပေးမှ ထုတ်လုပ်ပေးမည်ဟု ပြောလာသည့်အပြင် ထိုသို့ ငွေရှာရန် ကျွန်မသည် ငွေကြေးပြည့်စုံသော လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ လိုအပ်လို့ ခေါ်သည့်အခါ အဖော်အဖြစ် မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို သွားရောက်ဧည့်ခံပေးရမည်ဟု ဆိုလာခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် ကျွန်မသည် အလှမယ်တစ်ဦး၏ အခွင့်အရေးကို အလွဲသုံးစားပြုကာ တန်ဖိုးကြီးမားသော ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုလည်းစွပ်စွဲထားပါသည်။
သူတို့၏ စွပ်စွဲချက်ဟုတ်မဟုတ်ကို ကျွန်မက အသရေဖျက်မှုဖြင့် ပြန်လည်သက်သေခံ ရမလို ဖြစ်နေ ပါသည်။
တကယ်တော့ ကျွန်မနောင်တရမိခဲ့ရသည့် တစ်ခုထည်းသောအချက်မှာ ကျွန်မ၏အသက်ကို (၁၆) နှစ်မှ (၁၈) နှစ်အထိ ပြင်ဆင်ခဲ့သော ကိုယ်စားလှယ် ဒါရိုက်တာများကို ထိုထက်ပို၍ခိုင်ခိုင်မာမာ သဘောမတူဘဲ တားမြစ်ခဲ့ဖို့ ကောင်းလေခြင်းဟုဖြစ်ပါသည်။
ယခုထက်ပိုသော အသေးစိတ် ရှင်းလင်းချက်များကို များမကြာမီကာလတွင် မြန်မာပြည်တွင်း စာနယ်ဇင်း များတွင် ဖော်ပြနိုင်ရန် မိခင်ဘာသာစကားဖြင့် ဆက်လက်တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကံကောင်းသည်က ကိုးရီးယားရှိ အဖွဲ့အစည်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်ဒါရိုက်တာများနှင့် စကား
ပြော သည့်အခါ မူမမှန်သည့် ပြောကြားမှုမျိုး ကြားလာရသည့်အခါတိုင်းတို့တွင် ကျွန်မတို့သားအမိက သက်သေခံကျန်ရှိစေရန် အသံဖမ်းထားလိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်မဖက်မှ အလှမယ်တစ်ဦး၏ ဂုဏ်ပုဒ်နှင့် ဆန့်ကျင်၍ သရဖူပြန်သိမ်းရလောက်အောင် အကျင့်ပျက် ယွင်းသည့် အပြုအမူ အပြောအဆိုတစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း အလျဉ်းမရှိကြောင်း သံသယကင်းရှင်းစွာ အာမခံနိုင်သော်လည်း ယခုကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းမှ ပေးအပ်ခဲ့သော သဖူကို ပိုင်ဆိုင်ဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ကျွန်မ၏ဂုဏ်သိက္ခာ အတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစရာမရှိတော့သည့်အလျောက် အဆိုပါပစ္စည်ကို လည်းမက်
ထိုသို့ဆိုသော်လည်း ထိုသရဖူကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကိုယ်စားလှယ် ဒါရိုက်တာများထံသို့တော့ ကျွန်မက
ပြန်လည်အပ်နှံရန် လုံးဝသဘောမတူနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယင်းတို့ဇနီးမောင်နှံ၏ အကျင့် စရိုက်နှင့် အပြုအမူတို့ကြောင့် ယခုကျွန်မနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စတွင်သာမက နောက်နောင်တွင် ကျင်းပလတ္တံသော အလှမယ်ရွေးချယ်ပွဲများတွင်ပင် ပါဝင်ပတ်သက်ရန်လုံးဝမသင့်တော့ဟု ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ ယုံကြည်မိသော ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဖက်၏ လိမ်ညာလှည့်ဖြားမှုများကြားဝယ် ကျွန်မသည်သာမက ကျွန်မ၏ နိုင်ငံကပါ အများအမြင်တွင် သိက္ခာကျဆင်းမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသည်။
ကျွန်မကို အပုပ်ချလိုဇောဖြင့် ပြောခဲ့သော သူတို့စကား များကြောင့် ယခုအခါတွင် မြန်မာနိုင်ငံကအလှမယ် က သဖူခိုးယူထွက်ပြေးတယ်ဟုပင် မီဒီယာအချို့တွင် ရေးသားလာကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်တမ်းတရားပြောဆိုခဲ့သော အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် ကျွန်မတို့နိုင်ငံအပေါ် သူတို့ ဖက်က မှားကြောင်းပြန်လည်တောင်ပန်စကားဆိုရန် အကြွေးတင်နေပြီဟု ယူဆမိသည်မှာ သဘာဝ ကျကြောင်း လက်ခံကြလိမ့်မည်ထင်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ရာ ၄င်းတို့ဖက်မှ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သိက္ခာကျဆင်းအောင် ပြောဆိုမိသည်နှင့်ပတ်သက်၍ မှားယွင်း မိကြောင်း တောင်းပန်စကားဆိုလာသည်ကို တွေ့ရမည်ဆိုပါက ကျွန်မအနေဖြင့် သူတို့ပေးအပ်ခဲ့သော သရဖူကို လိုလိုလားလား ပြန်လည်စွန့်လွှတ်ကာ ပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာအပ်ပါသည်။
အချိန်မအားလပ်သည့်ကြားမှ လာရောက်သော လူကြီးမင်းများအတွက် ကျွန်မ ဒီနေရာမှာပင် နိဂုံးချုပ် လိုက်ပါရစေ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အခုလို ပြောခွင့်ရသည့်အချိန်တွင် ကျွန်မကို အားပေးချီးမြှောက်ကြသော လူထု ပရိသတ်ကြီးကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြာလိုက်ပါသည်ရှင်။
မေမြတ်နိုးရဲ့ တုန့်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက် အပြည့်အစုံ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကိုလည်း ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Posted in: Celebrity , Eaint Than Zin , Statement , ကြေညာချက်
မေမြတ်နိုးကို လုံးဝကိုဘဲ အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါသည်။
လှနုထွန်း၏ ကောက်ကျစ်မှု လူလည်ကျမှုများက ပေါ်လွင်ပါသည်။ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို အနိုင်ကျင့်တာ အရှင်းကြီးဘဲ။
​မေမြတ်​နိုး ကို အပြည့်​အ၀ ယုံကြည်​ပါတယ်​။
ကိုရီးယား အထီး​တွေက နှာဘူး​တွေ များတယ်​။သွား​ရောက်​ ဘူးသူတိုင်း ​ကောင်း​ကောင်း သိတယ်​။
ဟုက်တယ် Iလည်း youပြောတာကိုယုံကြည်တယ်gutsရှိပါ မေမြတ်နိုး
proud of you sis, never give up.
never give up sis. we all are here for u